January 2019 - Raaso News Network ( RNN )
Dooda kooxda ku guulaysan doonta koobka Premier league iyo afarta kooxood ee England ku matali doona tartanka UEFA Champions League ayaa wali ah mid taagan oo aan wali si rasmi ah loo ogayn balse waxay hadda u muuqataa in saadaasha Premier league ay ka fududahay sidii ay ahayd bilawgii xili ciyaareedkan. Iyada oo aan maalmaha soo socda la ciyaari doonin ...
Barcelona ayaa Camp Nou ku dubatay kooxda Leganes oo iska caabin xoogan kala hortimid waxayna Barca soo ceshatay shantii dhibcood ee ay hogaanka La Liga ku haysay. Ousmane Dembele oo kulankan dhaawac xanuun badan looga saaray ayaa dhaliyay goolka furitaanka ee ay Blaugrana hogaanka ku haysay qaybtii hore. Laakiin kooxda leganes ayaa ciyaarta dib ugu soo laabtay qaybtii labaad balse ...
Kooxda Chelsea ayaa xalay guuldaro xanuun badan kala soo laabtay Arsenal waxayna guuldaradaasi murugo badan ku abuurtay Maurizio Sarri oo si qaawan u qirtay in ay adag tahay in uu sare u soo qaado mooraalka iyo niyada ciyaartoyda kooxdiisa waana hadal si wayn u damqay jamaahiirta Blues laakiin waxaa jiray dhawr ciyaartoy oo si gaar ah loo bartilmaameedsaday. Khabiirka BT ...
Chelsea ayaa kusii dhawaanaysa inay lasoo saxeexato weeraryahanka kooxda AC Milan isla markaana amaahda kaga soo maqan Juventus ee Gonzalo Higuain, Blues ayaa saxeexiisa doonayay suuqii xagaaga kahor intii uusan u dhaqaaqin Milan. Kaddib lix bilood oo bandhigyo isku dhex jira uu kusoo sameeyay Milan, Weeraryahanka ree Argentina ayaa haatan u imanaya Stamford Bridge si uu u xaliyo dhibaatada weerar ...